Nnyocha na nyocha ọnụahịa mmepụta na njikwa nke ntinye ego | Yingyi
Nnyocha na nyocha ọnụ ahịa mmepụta na njikwa nke ntinye ego
Nkedo itinye ego mmepụta tumadi gụnyere usoro anọ: nkwadebe modul, nkwadebe shei, alloy agbazena nkedo post ọgwụgwọ. N'ihi na usoro a abụghị naanị usoro dị iche iche, mgbagwoju anya ngwaahịa, usoro mmepụta ogologo, na usoro nkedo bụ ọkachamara. Ya mere, oriri nke ihe mmepụta ihe site na ntinye aka na mmepụta abụghị ihe omimi na nke doro anya, na ụdị dị iche iche eji eme ihe dị mgbagwoju anya na ọnụ ọgụgụ ahụ adịghị mfe N'otu oge ahụ, n'ihi usoro nkedo dị iche iche na-amịpụta na mkpụrụ, yana mmụba na-arịwanye elu. itinye ego na mkpochapụ uzuzu na nchedo gburugburu ebe obibi, dugara na ntinye ego nkedo ụlọ ọrụ nyocha ego na njikwa ọnụ ahịa Usoro ahụ siri ike karị.
1. Basic mejupụtara nke mmepụta ego nke ulo oru nkedo ulo oru
Ọnụ ego mmepụta nke ntinye ego na-ezo aka na ọnụ ahịa metụtara mmepụta na ịrụ ọrụ nke ụlọ ọrụ A na-ekewa ọnụ ahịa mmepụta nke ntinye ego na ọnụ ahịa ihe onwunwe, ụgwọ ọrụ kpọmkwem na ọnụ ahịa mmepụta ihe. Ọnụ ego gburugburu ebe obibi na-esonye iche na ọnụ ahịa mmepụta nke nkedo itinye ego.
1.1 Ọnụ ihe
A na-akpọ ọnụ ahịa ihe eji eme ihe kpọmkwem nke ụlọ ọrụ na-eji na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị ka ọnụ ahịa ihe onwunwe, nke nwere ike kewaa n'ime ihe dị iche iche na ihe ndị bụ isi nke mejupụtara isi ihe nke ngwaahịa dịka ọrụ dị iche iche si dị. Mmanụ na ike na-eri site na usoro; Ejikọtara ya na isi ihe nke ngwaahịa, ma ọ bụ na-enye aka n'ịmepụta ngwaahịa na oriri nke ihe enyemaka.
1.2 Direct ọrụ
Na-ezo aka na ụgwọ ọrụ na ọdịmma nke ndị ọrụ mmepụta ihe na-ekere òkè kpọmkwem n'ichepụta ngwaahịa.
1.3 Mmefu nrụpụta
Na-ezo aka na mmefu nchịkwa dị iche iche na-akpata site na ngalaba mmepụta nke ọ bụla nke ụlọ ọrụ ntinye ego maka nhazi na njikwa mmepụta, yana ọnụ ahịa mmezi na ọnụ ahịa mbelata nke igwe na akụrụngwa.
1.4 Ogo Ọnụ
Ọnụ ego dị mma na-ezo aka na ngụkọta ọnụ ahịa ụlọ ọrụ iji hụ na ọkwa ngwaahịa akọwapụtara na njikwa mma zuru oke, yana mfu nke ọdịda ọdịda eruteghị ọkọlọtọ.
1.5 Ọnụ ego gburugburu
Ọnụ ego gburugburu ebe obibi na-ezo aka na ego a na-ewere ma ọ bụ chọrọ iji mee ihe maka mmetụta nke mmepụta nkedo na gburugburu ebe obibi dịka ụkpụrụ nke ịbụ onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, yana mmejuputa ebumnuche gburugburu ebe obibi site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ akwụ ụgwọ site na ụkpụrụ na ihe achọrọ. tumadi gụnyere akụkụ ndị a 1) ọnụ ahịa nke ibelata ihe ndị na-emetọ ihe (2) ọnụ ahịa mgbake, ijigharị na mkpofu (3) ọnụ ahịa ịzụ ahịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (4) ụgwọ nlekọta gburugburu ebe obibi (5) ụgwọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze nke nchebe gburugburu ebe obibi (6) ụgwọ mmefu gburugburu ebe obibi.
2. Ntinye ego nkedo mmepụta ihe na-eri ego
Ọnụ ihe onwunwe bụ isi akụkụ nke ọnụ ahịa nkedo itinye ego. N'ime mmepụta nkedo n'ezie, ihe nkedo dị iche iche na-erikarị ogbe ihe. Otu esi eme ka ihe na-eri ihe dị mma
Nchịkọta na nkesa nke ngwaahịa dị iche iche kwesịrị iche echiche. Dị ka usoro eruba nke ntinye nkedo mmepụta, ihe onwunwe na-eri nwere ike ịnakọta ma kesaa na ebu oriri na ebu shei Material, ụgwọ oriri 3 isi akụkụ.
2.1 Oriri ebu
N'ime nkedo itinye ego, enwere ike ịmegharị ihe anwụ anwụ. Oriri ebu na mmepụta na-agụnye mfu mgbake na mfu ihe fọdụrụnụ wax ka ọkụ. Mgbe a na-edozi usoro nhazi ebu, enwere ike tụọ ya Gbakọọ oke oriri na ọnụ ahịa ọnụ ahịa.
2.2 Ụdị shei ihe oriri
Ihe mkpuchi shell gụnyere ntụ ntụ ntụ, aja, ihe nkedo na ihe ndị ọzọ. Akụrụngwa ndị a na-eri maka ịkpụ shei na-emetụta akụkụ elu nke shei ahụ. Mgbe shei ihe, mkpuchi oyi akwa nọmba na usoro bụ ụfọdụ, ị nwere ike iji ebu Group elu ebe ma ọ bụ ụdị shei arọ ekenye ihe onwunwe na-eri.
2.3 Ịkwụ ụgwọ
A na-agbaze ihe igwe nke ntinye ntinye ego dịka ọkụ ọkụ. Mgbe ị na-agbakọ ntinye ụgwọ, a na-ewere ọkụ ọkụ dị ka nkeji, a na-edekọkwa ihe ndị e ji ígwè mee na ihe nkedo nke ọkụ ọ bụla dịka "nọmba ọkụ" Ụdị na ọnụ ọgụgụ.
2.4 Ọnụ ego nke ihe nkedo
Site na ndekọ ọnụ ọgụgụ dị n'elu, anyị agbakọọla ọnụ ahịa mfu ebu maka ụfọdụ ụdị nkedo otu ngwaahịa, ọnụ ahịa shei na-eri ihe maka imepụta otu ngwaahịa na ọnụ ahịa igwe maka ngwaahịa otu.
3. Ụzọ iji chịkwaa ọnụ ahịa mmepụta nke ụlọ ọrụ ntinye ego
N'ime ego niile na-emepụta ihe nkedo mmepụta ego nke ihe onwunwe na-eri bụ akụkụ kachasị ukwuu na mmetụta, ya mere njikwa nke ihe onwunwe na-elekwasị anya na njikwa ego niile. N'ozuzu, ọrụ kpọmkwem na ọnụ ahịa mmepụta ihe na-enwe mmetụta dị nta na ọnụ ahịa mmepụta, ma n'ọnọdụ pụrụ iche, ọnụ ahịa dị mma na ọnụ ahịa gburugburu ebe obibi, dị ka usoro mmepụta na ọnụego jụrụ, nwekwara mmetụta dị ukwuu na mmepụta ọnụahịa Mmetụta. Maka ihe ndị na-emetụta ọnụ ahịa mmepụta nke ụlọ ọrụ, ọ dị mkpa ịmepụta usoro nchịkwa ezubere iche.
3.1 Belata oriri ihe
Na mmepụta n'ezie, a ga-akwadebe ihe ndị dị n'ime oke usoro ahụ ma kenye ya dị ka atụmatụ mmepụta ihe si dị, na ihe ndị a na-ejighị eme ihe ozugbo na mmepụta ngwaahịa na-abụghị n'ime oke oriri ga-enyocha nzọụkwụ site nzọụkwụ nkesa nkesa, site n'ichekwa ihe ubi ka ọ bụrụ nkesa. melite ọnụego itinye n'ọrụ, site n'ịkwalite usoro ahụ iji mepụta usoro sayensị na nke ezi uche dị na ya, iji belata oke nke mmepụta ihe ọhụrụ.
3.2 Melite mkpụrụ usoro ma belata ọnụego jụrụ nkedo
Usoro nhazi na njikwa saịtị bụ isi ihe abụọ na-emetụta mkpụrụ usoro. Usoro mgbanwe kwesịrị rụrụ site usoro nkwenye tupu uka ego na ọzụzụ nke elu àgwà usoro emepụta Innovation, iji melite ngwaahịa arụmọrụ na usoro mkpụrụ, belata ngwaahịa na-eri. Site na imeziwanye nha nke ihe nkedo na imeziwanye usoro ubi, enwere ike imeziwanye ọnụego ojiji nke mmiri mmiri alloy. Bulite njikwa saịtị.
3.3 Chekwa ike ma belata oriri ike
Ike oriri nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-akpata 23% ~ 62% nke oriri ike nke ụlọ ọrụ igwe. Oriri ike bụ coke, coal na ọkụ eletrik, ikuku ikuku, oxygen na mmiri sochiri ya. Ụlọ ọrụ ntọala na China Ọrụ ike bụ naanị 15% ~ 25%. Dịka ọmụmaatụ, akụrụngwa na-agbaze na ike na-agbaze bụ ihe dịka 50% nke oriri ike nke mmepụta nkedo dum. Imelite akụrụngwa mgbaze azụ nwere ike ibelata oriri ike nke mmepụta nkedo Igodo.
3.4 Mee ka nchedo gburugburu ebe obibi dị ike ma kwalite ọgwụgwọ na imegharị ihe mkpofu ihe nkedo
Imegharị ihe mkpofu ọ bụghị naanị na-ebelata mfu nke ihe ndị dị mkpa, kamakwa na-ebelata ọnụ ahịa ya ozugbo. N'otu oge ahụ, site n'echiche nke ọnụ ahịa gburugburu ebe obibi, nsogbu ọgwụgwọ mkpofu dị na nkedo nkedo na-echekwa ego dị ka ọgwụgwọ ikpeazụ na ịmegharị ájá ájá na-ekpochasị mgbe nkedo shei, na-echekwa ọnụ ahịa, ibelata ume ọkụ na ibelata mmetọ gburugburu ebe obibi.
3.5 Melite nrụpụta ọrụ
Ịbawanye arụpụta ọrụ nwere ike ibelata ụgwọ a kapịrị ọnụ n'otu nkeji ngwaahịa. Mee ka nrụpụta ọrụ dịkwuo mma, ọ dị mkpa iji melite ọkwa nke mmepụta mechanized mgbe niile, iji teknụzụ ọhụrụ, Usoro ọhụrụ, iji nweta ọkachamara.